Homeसमाचारआज डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ: हेर्नुहोस्
September 2, 2020 admin समाचार 11189
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रिदर ११६ रुपैया ८९ पैसा पुगेको छ । मंगलबार डलर ११७ रुपैयाँ ४८ पैसामानै खरिद भएको थियो।
यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय ३९ रुपैयाँ २३ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३९ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एक’को खरिददर १ सय ५६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रिदर १ सय ५७ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६६ पैसा छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ।
मलेसियन रिँगिट एकको खरिद’दर २८ रुपैयाँ ०७ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिद’दर ३१ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरि’ददर ३१ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको’ छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ८१ रुपैयाँ ०२ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ८२ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ।
बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय ०८ रुपैयाँ ४६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय १० रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ। कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ भने विक्रीदर ९ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ ।
बढ्यो डलरको मूल्य, हे’र्नुहोस कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
June 1, 2021 admin समाचार 1200
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबा’रका लागि विदेशी मुद्राको विनि’मय दर तोकेको छ । तोके अनुसार आज अमेरिकी डलरको मूल्य सोमबारको भन्दा बढेको छ । । सोमबार अमे’रिकी डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ६१ पैसा
June 18, 2021 admin समाचार 1303
कलाकारको फेसबुक ह्या’क गरेको आ’रोपमा १४ वर्षका किशोर प’क्राउ
April 6, 2021 admin समाचार 2207
निर्देशक तथा हास्य’कलाकार दीपाश्री निरौला, अभिनेता सरोज खनाल लगायतका कलाकारहरुको फेसबुक ह्या’क गरेको आ’रोपमा प्रहरीले एक जनालाई प’क्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पर्सा बहुदजरमाई नगरपालिका-५ बस्ने १४ वर्षीय बालकलाई पक्रा’उ गरेको हो
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205552)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196908)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196405)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (196251)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194735)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194421)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192621)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192253)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (185036)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161707)